Dunida ma ka jiraa madaxweyne oggol in madaxweynayaal kale garab yaacaan? - BBC News Somali
Maxaa sabab u ah madaxweynayaal hal waddan ka wada jira?
Soomaaliya oo maamul federaal ah uu ka hanaqaaday in ka yar 10 sano ayaa waxaa uu jahwareer badan ka dhashay qaabka ay isu la janqaadi karaan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo marar badan isku khilaafay awoodaha iyo go'aanada siyaasadeed.
Marka qof uu maqlo magaca ''Madaxweyne'' waxaa maankiisa kusoo dhaco hogaamiyaha dal ama jamhuuriyad, balse Soomaaliya waxaa madaxda maamulada loogu yeeraa isla magaca Madaxweyne, taas oo keentay jahwareer badan iyo is-garab yaac ka dhashay hogaanka dalka, maadaama maamul kastaa uu leeyahay hoggaamiyayaal loogu yeero madaxweynayaal.
"Waxaa hannaanka la diyaariyay xilli ay hoggaamiyo kooxeedyadii ay kala shakisnaayeen, mana aysan dooneyn in Madaxweynaha uu awood badan yeesho", ayuu yiri Sakariye.
Madaxda maamul goboleedyada oo soo gaaray magaalada Garoowe
"Inta uu jiro kala shakiga qabaa'ilada iyo hoggaamiyayaasha u dhexeeya iyo cabsida la kala qabo way adagtahay in la dhiso dowlad adag", ayuu raaciya abukaataha.
Madaxda maamullada Itoobiya waxay awood u leeyihiin maamulka gudaha deegaannadooda, balse dowladda federaalka ayaa go'aan ka gaarta khayraatka, difaaca, maaliyadda iyo arrimo kale, taasi oo ka duwan Soomaaliya oo marka dowladda federaalka ay damacdo inay tallaaba qaado ay ku qasban tahay inay qanciso,lana tashato maamulada kale.
"Dowladda keligeed go'aan ma gaari karto, waana in la tashi ay la yeelato maamullada. Taasna waxaa sabab u ah dastuurka", ayuu yiri Sakariye yusuf.
Wuxuu intaa ku daray, "Iyadoo lakala baqayo ayaa dastuurka la sameeyay, marka waxaa laga dhigay mid nugul oo wax aan laga wadatashan uusan sameyn karin madaxweynaha".